လူမျိုး ဘာသာ မခွဲခြားဖို့ ပြင်သစ်အစိုးရတိုက်တွန်း လူမျိုးဘာသာ အဆင့်အတန်း မခွဲခြားဘဲ အရပ်ဘက် တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ အစိုးရက မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အကြမ်းဖက်မှု ထပ်မံ ဖြစ်ပွားတဲ့ သတင်းတွေ မနေ့က ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် အဲဒီလို တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင်တွေဟာ ဘယ်လို အခြေအနေ အဆင့်အတန်းမျိုးမှာ ဖြစ်နေပါစေ၊လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာတဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိမှတ်ပြုခံပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းပါတယ်။
Rohingya said that they want to be France citizen .Can France Govt: accept and bring them to France ?
France Must keep the Rohinjar between your wife and daughter. You know that what going on real France women on the street?.
လူမျိုး ဘာသာမခွဲခြားပဲ နိုင်ငံသားပေးရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို မင်းတို့ပြင်သစ်ပြည်ကို ပို့ပေးလိုက်မယ်။ အားလုံးကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်ပြီး မင်းတို့ပြင်သစ်သူတွေနဲ့မျိုးဖောက်ပေးလိုက်ပေါ့။ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတော့မပေးနိုင်ဘူးကွ။
Aug 07, 2012 01:44 PM
ဘက် မလိုက်တဲ့ သတင်းဏ၏ဌာ န rfa ကိုကျေးဇူးပါ သတင်းအကုန်လူံးကို အသိပေးဖို့က သတင်းသမားတွေ၇ဲ့ တာဝန်ပါ
Aug 07, 2012 02:36 AM